Baidoa Media Center » Deeq lacageeda oo loo qeebiyey bukaano kujira isbitaalka guud ee Baydhabo‏.(Sawiro)
Deeq lacageeda oo loo qeebiyey bukaano kujira isbitaalka guud ee Baydhabo‏.(Sawiro)
August 25, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Hay,adda alhimma foundation ayaa waxay deeq lacageeda gaarsiisey dad bukaano ah oo kujira isbitaalka guud magaalada baydhabo kuwaaso duruufo adag meesha kuheysato.
Dadka lacagta la gaarsiiyaya ayaaa dhamaantooda ahaa kuwa dhaawacyo kala duwan iyadoona halkaasi ku heysatey dhibaatooyin waxaana arinkaan noqotey mid aad ugu farxisey.
bukaanadaan ayaa qofkiiba la siiyay lacag gaareyso ilaa iyo 300 (boqol kun shilin somali) taasi oo iminka ka dabooleyso baahi yar waxayna dadka soomaaliyeed ka codsaneen in la gargaaro Madaama ay qabaan dhaawacyo iyo xanuuno.
Sidoo kale waxay u mahad celiyeen dadkaan mas’uuliyiinta Hay’ada Al-Himma foundation oo lacagta ugu deegeen waxay mar labaad wax ka codsanayaan walaalohooda kale iney kudeyadaan alhimma foundation oo caawiyaan
mana ahan markii ugu horeysi ee Hay’adaan deeq noocaan oo kale qeybiso.
Wax qabadka Al-himma Keliya Kuwa Koobano Deeqaha Lacageed oo keliya Waxaana Sidoo kale Hay’adaan alhimma foundation ay deeq dhar ciid ah u qeybisey caruur agoon ah oo kunool magaalada baydhabo kuwaas aan heli karin dhar ay kuciidaan maadaama aabiyaashooda ay dhinteen.
agoonta dharka loo qeebiyey tiradooda waxay gaareysaa 90 caruur kuwaasi oo kunool gobolka baay magaalo madaxdiisa baydhabo waa markii labaad oo agoontaani sidaan oo kale ah dhar ciid u qeebiyo alhimma foundation waxay caawisaa dadka danyerta ah,
Ugu Dambeyntii ha,adda wadaniga alhimma foundation ayaa sidoo kale deeq raashiin oo zakaatul fitri ah ku qeybisey magaalo madaxda gobolka baay ee baydhabo deeqdaasi oo ka timad masjidka ahlu sunna waljamaca ee sweden magaalada gotaborg waxaa ka faa iideystey dad gaaraay ilaa 300 qof oo ubadan dad masaakiin danyer ah oo kuna nool magaalada baydhabo
kala xiriir hay,adda alhimma foundation tell :252615553789 +254719147676 E-mail : alhimma_foundation@hotmail.com / mukhtaar60@hotmail.com/ ama caoun number :MUQD0012187 DAHABSHIIL